Maitiro ekumhanyisa chaiwo MS-DOS mitambo yemavhidhiyo pane Steam Play | Linux Vakapindwa muropa
El Valve mutengi, SteamIwe unotoziva kuti inosanganisira chirongwa cheProton, kumisikidzwa kweWine yakagadzirwa neCodeWeavers uye Valve pachayo kuti ikwanise kumhanyisa Microsoft Windows mitambo yemavhidhiyo pane yako Linux kugovera. Unogona kutomhanyisa yakawanda mitambo yemavhidhiyo, inopfuura chiuru, yeavo varipo. Saka pamwe nezviuru zvatove zviripo zveLinux natively, nyika yekutamba papuratifomu yedu yatora.
Asi pamwe havazi vazhinji vevashandisi veSteam vanoziva kuti vanogona zvakare kumhanya zvekare MS-DOS mitambo yemavhidhiyo iwe yaunogona kupora nekutenda kune imwe yesarudzo musarudzo yemutengi. Chokwadi unoziva DOSBox, iyo emulator iyo inodzokorodza iyo DOS system kuti ikwanise kumhanyisa software yechinyakare kubva kune ino yekare sisitimu yekushandisa. Zvakanaka, unogona kusanganisa chishandiso mukati meStam, a yemhando vhezheni yeDOSBox inonzi Boxtron.
Boxtron, saProton, irikuchinjawo uye ichiwedzera kugadzirisa pamwe neyakagadziridzwa. Iwe unofanirwa kuziva kuti chishandiso chisiri chepamutemo, uye kuti kune akawanda eaya asina kufanira maturusi aunogona kuwedzera kuSteam kuti uwedzere kugona kwayo, uye ese akaiswa zvakafanana ...
Ungaite sei kuti ikwanise kutamba mitambo yeDOS vhidhiyo? Zvakanaka, iwe unofanira kungotevera zvinotevera matanho:
Unzip iyo tarball tar.xz.
Inoisa zvemukati mu nzira ~ / .steam / mudzi / kuenderanatools.d /
Vhura Steam, uye tinya kurudyi pamutambo mune yako raibhurari yemutambo, enda kune Zvivakwa.
Pindai menyu iyo yaunayo ikozvino pamberi pako, iwe unofanirwa kuve neBoxtron padhuze neProton.
Y kutamba kumutambo wako wekare waunofarira… Zvirokwazvo une zvinopfuura chimwe chete mune yako runyorwa rwemitambo yeredro yaunofarira.
Ichokwadi ndechekuti sechinyakare sezvavari, kunyangwe izvozvi studio dzekuvandudza dzichiedza kugadzira zvinowanda zvemitambo yemavhidhiyo uye nemikana yakawanda ... klassiki mitambo yemavhidhiyo vanoramba vachibata vazhinji uye havabude muchitaera. Iwe haunete navo uye iwe unogara uchida kuvadzosa kuti vatambe zvakare. Nostalgia yemitambo!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Maitiro ekumhanyisa echinyakare MS-DOS mitambo yemavhidhiyo pane Steam Tamba
Yakaburitsa vhezheni itsva yeLakka 2.3 neRetroArch 1.7.8 uye nezvimwe